10 Suuqyada Cunnada Ugu Fiican Dunida | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Suuqyada Cunnada Ugu Fiican Dunida
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 31/01/2021)
Waad ku safri kartaa adduunka oo dhan, laakiin waxaad kaheli doontaa cuntada meesha ugu wanaagsan. Naga 10 suuqyada cunnooyinka ugu fiican adduunka ayaa kuu sheegi doona dhammaan sirta ku saabsan dadkeeda, dhaqanka, taariikhda, iyo sida laysugu milmi karo, oo leh qaniin kasta oo baastada ka mid ah, miro xiddig, iyo bolse. Intaa waxaa dheer, haddii taasi aysan ku filnayn, markasta waad waydiin kartaa meheradaha cuntada’ milkiilayaasha talooyinka gudaha, Yurub ilaa Shiinaha.
1. Koorsooyinka Saalaya Suuqa Cuntada ee Nice
Suuqa ugu weyn ee bannaanka Nice waa suuqa cuntada iyo ubaxyada ee Cours Saleya ee Old Nice. Halkan waxaad ka heli doontaa keega cusub, cheese, geedo si ay dib ugu soo celiyaan xusuus ahaan, iyo macmacaanka deegaanka.
Kaliya maahan inaad ku raaxeysatid sida ugu fiican ee cunnada Faransiiska, laakiin waxaad ku wada kulmidoontaa hawada cusub ee bada. Ubaxyadu waxay istaagaan meel u dhow dhammaystirka goobta a waayo-aragnimo cunto karis ah.
Suuqa cuntada ee cajiibka ah ee Nice ayaa ku sugi doona adiga subax kasta, marka laga reebo Isniinta.
2. Suuqyada Cunnada Ugu Fiican Adduunka: Suuqa Degmada London
London waxaa caan ku ah suuqyada waddooyinka layaabka leh, xaafadaha quruxda badan, iyo jidad leh vibes gaar ah. Ma jiraan wax la tartami kara jawiga gaarka ah ee xiisaha leh suuqyada cuntada ee London, iyo suuqa cuntada degmada waa kan ugu fiican.
Halkan waxaad ka heli doontaa cuntada waddooyinka ugu fiican: Rooti Kappacasein rooti, rootiga Cunnada hore iyo keega, Marwo. Hilibka doofaarka ee King’s, iyo Greedy Ri jalaatada macmacaanka. Suuqan cajiibka ah ayaa soo dhaweynaya booqdayaasha maalin kasta, kii ugu dambeeyay 1,000 sano, waana mid ka mid ah astaamaha ugu sarreeya London.
3. Suuqyada Cunnada Ugu Fiican Adduunka: Suuqa Sanyuanli Ee Magaalada Beijing
Miro qalaad iyo cuntooyin dhif ah, Sanyuanli waa mid ka mid ah sirta Beijing ee qarsoon. Suuqa cuntada ayaa ah halka ay kuugga cuntada ee maxalliga ah iyo reer galbeedku u yimaadaan si ay uga iibsadaan miro xiddigooda ah iyo cunno cusub, iyo geedo laga soo dhoofiyo dalka
Sidaas, haddii aad jeceshahay inaad ku tijaabiso jikada, u baahan tahay inaad ku dhiirrigeliso, Meeshan waa. Suuqa cuntada ee Sanyuanli waxaad ka heli kartaa wax kasta, qiimaha jumlada, laakiin ku bixi lacag caddaan ah oo keliya. Suuqa cuntada ee Sanyuanli wuxuu ku yaal Degmada Chaoyang oo maalin walba wuu furan yahay.
4. Suuqa Cunnada Ugu Fiican Magaalada Munich: The Viktualienmarkt
Hadaad tahay shimbir hore, markaa at 6 am waxaa lagugu soo dhaweyn doonaa kafee cusub oo la soo saaray iyo urta qurxinta. Karnoll's macmacaankiisu waa mid ka mid ah istaandarka ugu horreeya ee cuntada ee laga furo suuqa cuntada ee Viktualienmarkt ee Berlin.
Marka lagu daro takhasuskaan Munich, Viktualienmarkt waxaad ku dhadhamin doontaa sausage cad oo fiican iyo suxuunta kale ee Bavaria. Fagaaraha u dhexeeya Frauenstrasse iyo Heiliggeistkirche, waxaad ka heli doontaa suuqa beeraleyda iyo goobta lagu kulmo ee Muncheners.
5. Suuqyada Cunnada Ugu Fiican Shiinaha: Suuqa Qoyan ee Kowloon Magaalada Hong Kong
Iyada oo tiro aan badnayn ay ka mid yihiin 581 oo xero, suuqa cuntada ee Kowloon waa suuqa ugu weyn Hong Kong. Waxaad ka heli doontaa suuqan cajiibka ah ee furan maalin kasta 6 ahay in 8 pm, oo kaliya 14 daqiiqado adigoo ka socda saldhigga Lok Fu. Waqtiga ugufiican ee la booqdo suuqa Kowloon waa habeenki marka nalku shidan yahay, oo dabaaldegyada cuntada ayaa bilaabmaya.
Kowloon City Wet market wuxuu soo bandhigayaa alaabada cusub ee ugu fiican, from seafood to vegetables. This market is so big, inaad u baahan tahay maalin dhan si aad u daboosho dhammaan 3 sheekooyin, laga bilaabo quraacda Hong-Kong ilaa qadada iyo cashada. Tan waxaa ka mid ah dhadhaminta cunnada Thai maaddaama dadka Thai halkan ku nool ay ugu weyn yihiin.
Talada ugu fiican ee aan u helno suuqa Kowloon waa inaan raacno dadka tirada badan. Sayidka, meheradaha iyo dukaamada ugu caansan waxay bixiyaan alaabooyinka ugu cusub, mahadsanid badeecada sare.
6. Suuqa Quadrilatero ee Bologna Talyaaniga
Iyada oo udgoonkeeda cajiibka ah ee saliidaha saliida leh, noocyada baastada, iyo cudurka dilaaga ah, Suuqa Quadrilatero waa jannada gebi ahaanba karinta. Waad ku heshiin doontaa taas cunnada ay Talyaani waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka, iyo cuntada dariiqyada ayaa ugu sarreysa jaantusyada cuntada adduunka oo dhan.
Haddaad weli qol leedahay, markaa tagliere-ka Romanzo ee goynta qabow waxay iid u noqon doontaa dareenka. Waxaad ka heli doontaa suuqan raashinka ee rabbaaniga ah meel u dhow Piazza Maggiore, furan Isniinta ilaa Sabtida.
Venice to Bologna Tareen
Florence ilaa Bologna Tareen
Rome ilaa Bologna Tareen Tareen ah
Milan oo ku socota Bologna Tareen
7. KadeWe Suuqa Cuntada ee Berlin
Suuqa cuntada ee KadeWe waa mid kamid ah suuqyada cuntada ugu raaxada badan 10 suuqyada cuntada ugufiican liiska aduunka. Suuqan cuntada Jarmalka ah wuxuu ku yaalaa mid ka mid ah dukaamada waaweyn ee Berlin wuxuuna ku faafaa dabaq dhan.
Sayidka, inkasta oo ay tahay hool cunto, waxaad ka heli doontaa xulasho aan la qiyaasi karin oo ka mid ah cuntooyinka suuqa cuntada ee KadeWe. Tusaale ahaan, hadaad farmaajo jeceshahay, ka dibna 1300 jiis kala duwan xulashadaada. Or, macmacaan qurux badan iyo dhaqan xumo, sida KadeWe suuqa cuntada, waxaa loogu talagalay cuntooyinka ugu fiican uguna macaan.
8. Suuqa Cuntada Bastille ee Magaalada Paris
Ka cunteynta suuqa ugu weyn cuntada ee Paris waa wax ay tahay in qof walba oo jecel cuntada uu sameeyo. Suuqa weyn waxaa loogu magac daray magaca Kacaankii weynaa. Marka waxaad ku dhadhamin doontaa indhahaaga iyo maskaxdaada wax walba oo Paris ay bixiso.
Toddobaadkiiba laba jeer ayaa lagugu soo dhaweyn doonaa gacmo furan iyo xiisaha Faransiiska. Waxaad la dhexgeli doontaa dadka maxalliga ah waxaadna ku raaxeysan doontaa rootiga Faransiiska, farmaajo cusub, iyo bolse cajiib ah. Kaliya u soco Boulevard Richard Lenoir, waxaadna arki doontaa tirada cajiibka ah ee goobaha cuntada lagu iibiyo, carafo, iyo midabbo.
9. Suuqa Kalluunka Rialto ee Magaalada Venice
Bangiyada Kanaalka Weyn, waxaad arki doontaa suuqa cuntada ugu da'da weyn Venice, Suuqa Kalluunka Rialto. Waxaa loogu magac daray buundada dhexe ee Venice, suuqa kalluunka Rialto wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo la yaab leh oo badda ka mid ah iyo isku darka dhow ee dadka reer Venet.
Suuqa Rialto wuu ka furan yahay 8 waxaan ahay ilaa qadada, Talaado ilaa Sabti. Waxaad ka heli doontaa Pescheria iyo Erberia dhinac dhinac, sidaa darteed waxaad heli kartaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay qado, laga bilaabo khudaarta darayga ah ilaa miisaska miisaanka tooska looga gooyo ee badda.
10. Suuqa Cuntada Testaccio ee Rome
Maalmo Talyaani qoyan ama dhammaadka usbuuc dhammaadka jiilaalka, suuqa cuntada 'Testaccio' waa meesha ugu fiican ee laga wada cunteeyo Rome. Suuqan cuntada ee cajiibka ahi wuxuu ku yaalaa goob qadiimiga Roman ku taal, sidaa darteed waxaad ku qaniini doontaa saxan baastada cusub oo ku duugan taariikh hore.
Suuqa Testaccio waxaa lagu magacaabaa Nuovo Mercato tan iyo markii ay u guurtay goobteeda cusub ee xaafada Testaccio 80 sanado kahor. Si kastaba ha ahaatee, waxaad wali heli doontaa sanaadiiqdii hore ee cuntada lagu cuni jiray, Qaniinyada iyo ismarisyada Vali ee sanduuqa ku jira 90, Pasa-ga cusub ee Casa Manco ee sanduuqa ku jira 22, iyo qaar badan oo.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan kaa caawinno inaad qorsheyso tacabur cunno oo aan la ilaawi karin adduunka oo dhan tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada "10 Suuqyada Cunnada ee ugu Fiican Dunida" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-markets-world%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, waxaadna u badali kartaa zh-CN / fr ama / de iyo luqado badan.